> Resource > Free > Ladnaansho My Photos Free
Marka sawiro ay ka lumaan ama la tirtiro ka your computer ama camera digital, in aad la yaaban sida si aad u hesho dib u photos lumay. Hadii aad ku soo internet-ka oo ka raadin "My Photos Ladnaansho" ee internet-ka, waxaad heli doontaa barnaamijka sawir ah oo lagu magacaabo "My Photos Ladnaansho" bilaabatay.
"My Photos Ladnaansho" waa barnaamij aad u amaanay sawir ee internet-ka. Waa wax weyn dhammaan dhinacyada laga reebo waa barnaamij bixisay. Waxaad u baahan tahay si ay u iibsadaan software in ay ku raaxaystaan ​​oo ay soo kabashada xoog badan iyo ammaan. Ma jiraan qaar ka mid ah "My Photos Ladnaansho" kale oo lacag la'aan ah uu ka soo xusho? Jawaabta gabi ahaanba waa. Ka sokow, haddii aad leedahay Mac ah, "My Photos Ladnaansho" ma awoodi doonaan in ay aad u caawin. Waa arrin laga xumaado in uu in dadka isticmaala Mac ma yeelan karaan barnaamijkan soo kabashada sawir halkii ay u fududahay in la isticmaalo iyo awood leh.
Ha welwelina, tan iyo markii aad akhriska maqaalkan, waxaad heli doontaa dhowr "My Photos Ladnaansho" kale oo lacag la'aan ah oo cajiib ah. Oo dadka isticmaala Mac, waxaan ku talinaynaa doonaa fudud cusub iyo barnaamijka lagu kalsoonaan karo Mac kabashada sawir.
Qeybta 1: Ladnaansho My Photos u Free (Windows)
Qeybta 2: Ladnaansho My Photos Mac
Waxaan kula talin doonaa 4 barnaamijyo lacag la'aan ah oo sawir leh soo kabashada ee qaybtan, kuwaas oo dhan awood badan oo si sahlan loo isticmaalo:
MjM Photo Recovery waa barnaamij soo kabasho yar oo sawir lacag la'aan ah taas oo ka caawisa in aad ka bogsato images tirtiray ama formatted ka kaadhka xusuusta, USB drive iyo qalabka xasuus yar-yar awooda kale. Waxaa loogu tala galay gaar ah kaarka CF, kaarka SmartMedia, Sticks xusuusta iyo kaararka kale kaydinta warbaahinta.
1 Waa barnaamij dhab ahaantii yar yar iyo waa in gebi ahaanba bilaash ah;
2 In kastoo ay tahay u yar, oo aad weli ku eegaan karo helay sawiro.
1 Waxa aanu taageeraan drive deegaanka iyo sidoo kale qalabka leh awood weyn;
2 xawaaraha iskaanka waa mid aad u gaabis ah, gaar ahaan marka aad ka dooran iskaanka dheer,
3 Waxa aanu taageeraan xaalado aad u badan oo soo gaartay sawir.
Sida barnaamijka sawir free ah, AnyFound Photo Recovery Free Edition waxaad bixisaa yaab leh xawaaraha iskaanka. Dhinaca wanaagsan waa in ay ka badbaadiyay badan oo wakhti aad. Kooxda xun waa in aan ka heli karo oo dhan sawiro aad ka lumay. Si kastaba, nadiif ah, interface ka fudud iyo iskaanka degdeg ah ee aad caawimo barnaamijka dib u soo ceshano aad sawiro lumay si fudud.
1 Waxaad heli doontaa laba hab oo soo kabashada: "File Undelete" kabashada iyo "Barzakh PC" kabashada. Labada hababka waa si degdeg ah;
2 "PC biloow" feature gelineya inaad sii iskaanka soo dhaafay;
3 Waxaa laga qalabka ugu, oo ay ka mid drive adag maxalliga ah iyo xijaab ay taageeraan dib u soo kabashada sawir.
1 Waxa kaliya taageeraa kabashada sawir;
2 Waxaad ku eegaan karaa oo kaliya dhowr ah ka helay sawiro;
3 awoodda iskaanka wuxuu u baahan yahay in la hagaajiyo, in kastoo ay soomi.
ArtPlus Digital Photo Recovery waa aalad kabashada taas oo ka caawisa in aad ka bogsato sawiro ka qalab kala duwan lagu kaydiyo, oo ay ka mid drive deegaanka adag, kaadhka xusuusta, USB drive iyo ka badan ah. Waa awoodaan inay ka bogsadaan tirtiray, formatted, kharribeen ama sawiro xitaa burburay.
1 Waxa ay taageertaa ugu qaabab sawir iyo qaar ka mid ah noocyada cayriin image;
2 Waxa kale oo aad soo kaban karto sawiro ka kumbiyuutarka iyo DVD / CD la qalab;
3 Waxaad u abuuri karaa xasuusta file card image ceshan photos lumay ka file this image;
4 Waxaad noocyada file image / video / audio aad rabto karaa inuu ka soo kabsado ka hor inta iskaanka.
1 photos helay jira liiska kaliya ee guryaha file. File aan magaca asalka ah oo jidka, waxay qaadan doontaa waqti ka mid ah in ay doortaan kuwa sawiro aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado.
Wondershare Photo Recovery Waa dhamaystiran software kabashada sawir la interface nadiif ah oo u suurta galinaya in aad ka bogsato lumay, tirtiray, kharribeen ama formatted sawiro ka dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta kaydinta, oo ay ka mid adag drive computer, digital camera, kaadhka xusuusta, USB drive, iyo in ka badan. The engine kabashada awood iyo karti Falanqeynta boosaska badan ka dhigi this qalab yaab leh Ololaha Nolol aad u.
1 Waxa ay taageertaa nooc oo dhan image, iyo sidoo kale video iyo noocyada cod ah;
2 Waxaad ku eegaan karo oo dhan photos la arkay iyadoo barnaamijkaan;
3 Waxaad soo kaban karto sawiro laga badiyay sababo badan oo la barnaamijkan, sida tirtirka caadiga ah iyo formatting, isticmaalka aan habboonayn ee qalab aad, shil software, jeermiska fayraska iyo xitaa musuqmaasuqa qalab;
4 Waxaad badbaadin karo baar natiijada u soo kabashada ee mustaqbalka;
5 Waxaad xitaa ka raadin kartaa magacyada file ka dib markii iskaanka.
1 Tan iyo markii barnaamijka ujeedadiisu tahay inuu ka soo kabsado files badan lumay intii suurto gal kuu ah. Xawaaraha iskaanka saas ma aha degdeg ah.
Hadda, ma jiraan wax "My Photos Ladnaansho" version Mac ee suuqa. Laakiin ha ka welwelina, Wondershare Photo Recovery for Mac , oo ka shaqeeya la mid ah la Windows version Wondershare Photo Recovery ah waad u adeegi doontaa ugu fiican.
3 Talaabada inuu ka soo kabsado My Photos on Mac la Wondershare Photo Recovery for Mac
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan dib u soo kabashada kadib markii socda codsiga aad Mac.
Tallaabada 2 Dooro drive meesha sawiro ayaa laga badiyay ka oo guji "Scan" si ay u bilaabaan iskaanka sawiro laga badiyay.
Tallaabada 3 Waxaad ku eegaan karo helay sawiro ka dib markii iskaanka. Markaas calaamadee sawiro aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" si markaas badbaadin on xijaab kale ee aad Mac.
1 photos lumay si fudud loo overwritten karaa iyadoo xogta cusub, waxaad u baahan tahay inaad joojiso isticmaalka drive iyo abuurtaan Wondershare Photo Recovery for Mac sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo kabtaan oo dhan oo iyaga ka mid.
2 Hadii aad ku socoto inuu ka soo kabsado sawiro ka drive dibadda, waxaad u baahan tahay in ay si fiican u xirmaan aad Mac.